Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Azia Atsinanana tamin’ny Oktobra 2018
Azia Atsinanana · Oktobra, 2018
Tantara mikasika ny Azia Atsinanana tamin'ny Oktobra, 2018
Myanmar: Noafahana ihany i Suu Kyi
Myanmar (Birmania)30 Oktobra 2018
Nogadraina nandritra ny 15 taona tao anatin'ny 21 taona izy , kanefa afaka ihany ankehitriny . Ilay mpanohana ny demokrasia Birmana malaza sady mpitarika ny mpanohitra Aung San Suu Kyi dia navotsotry ny miaramila tohanan'ny governemanta ao Myanmar ny tolakandron'ny Asabotsy.
Filipina30 Oktobra 2018
Tranonkala maro voarara tany Myanmar. Norarana ihany koa ny Global Voices
Nanomboka nandrarà ny tranonkala maro, anisan'izany ny bilaogy miaraka amin'ny sehatr'izy ireo manokana ny Bagan ISP, iray amin'ireo mpanome tolotra aterineto roa ao Myanmar . Voarara ihany koa ny Global Voices.
Japana29 Oktobra 2018
Hong Kong (Shina)27 Oktobra 2018
Navoaka indray ny dokambarotr'i George Lucas tamin'ny taompolo 1980 tao amin'ny fahitalavitra Japoney
Japana25 Oktobra 2018
Namoaka indray ny andiana dokambarotry ny fahitalavitra Japoney tamin'ny taompolo 1980 izay manasongadina ilay mpanatontsosa sarimihetsika Amerikana George Lucas mihira fiderana ho an'ny orinasa mpamatsy fitaovana elektronika goavana Panasonic ny Twitter Japoney.
Shina: Aza adino ny anaran'izy ireny
Shina25 Oktobra 2018
Nofihazan'ireo manampahefana shinoa ho anaty boaty mainty, toy ireo tsiambaratelom-panjakana, ny isan'ireo mpianatra namoy ny ainy tamin'ilay horohorontany tao Wenchuan tamin'ny 12 mai 2008...Maninona no tsy manao ezaka mihitsy na kely aza mba hananganana lisitra iray misy ireo ankizy mahantra tradoza ireo? Ho soa ho an'ny firenena? Firenena toy inona...
Filipina25 Oktobra 2018
Feo avy ao amin'ny Wiki
Amerika Latina24 Oktobra 2018
Ampahany amin'ny majikan'ny olombelona sy ny ara-teknika ahafahan'ny Global Voices miasa ny wiki velona, izay ahafahan'ny mpiserasera manerantany milaza amintsika momba ny bilaogy sy ny tranonkala tokony hodinihantsika, sy ahafahantsika miara-manova tahirin-kevitra toy ny ny Torolàlana ho an'ny bilaogy tsy mitonona anarana.
Indonezia24 Oktobra 2018